ကိုယ်အလေးချိန်နည်း - Keto Eat&Fit
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Keto Eat&Fit
1 ဇူလိုင်လ 2020
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးစာရင်း ၄၀ ရိုးရှင်းပြီးတခါတရံတွင်အလွန်မမျှော်လင့်ဘဲအကြံပြုချက်များသင်ကူညီလိမ့်မည်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အမြဲတမ်းဘဲနဲ့မလိုအပ်တဲ့တင်းမာ။
အနီးစပ်ဆုံး၏နေ့စဉ်စားသုံးမှုကယ်လို[!@#$]၊ ဘယ်မှာသင်အလေးချိန်ရရှိမရီးကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဤနည်း၏အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်၊အစား ၀။၄၅ နှင့်များပြားအများအားဖြင့် ၁၄။
အလေးချိန်ကီ:၀၊၄၅ ႏွင့္ ၁၄
သစ်ကြံပိုးနှင့်ဖြန်း ဂျုံယာဂု၊ဒိန်ချဉ်၊ကော်ဖီနှင့်အခြားမည်သည့်အစားအစာပေါင်းစပ်ထားသည့်ဤအမွှေးအကြိုင်။ သူမအစြမ္းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဇီဝြဖစ်၊နှင့်တစ်ဝက်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတနေ့သင်ကူညီလိမ့်မည်စက်ကတစ်ကီတစ်လလျှင်။
လျှင်သင်အစာစား၊ရုံး မစားသောက်သင့်ရဲ့စားပွဲခုံမှာ။ လေ့လာမှုများအကြောင်းပြသတစ်လုံး၏ရှေ့တွင်ထိုင်စောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်၊လူလောင်၏ပျမ်းမျှ ၂၅၀ ကယ်လိုရီပိုမို။
ရယ်မောမကြာခဏ။ ၁၀-၁၅ မိနစ်ရယ်မောခြင်း၏နေ့စဉ်အတိုးအပတ်စဉ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအားဖြင့် ၂၈၀ kcal။
မှုကြောင့်အဆိုပါဖိုင်ဘာအကြောင်းအရာနှင့်အနိမ့်ကယ်လို မုန္လာဥနီသီးဖျော်ရည်ကိုအ ထောက်အကူပြုကြောင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အားဖြင့် ၁။၈ ကီလိုဂရမ်အဘို့အ ၁။၅-၂ လ။ စံ၏စားသုံးမှု—၁ ခွက်(၂၀၀ မီလီလီ)တစ်နေ့လျှင်။
ယူယမ်တက်ဘလက်။ ဤသည်သဲလွန်စဓာတ်သတ္တုမြှောက်အဆီ၏ပျက်ပြားစေသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂။၆%ပိုပြီးထိရောက်။
အတွင်းကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်ပင်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းလျှောက် နားထောင်ဖို့အကောင်းမြင်ဂီတ —ကလှုံ့ဆော်ဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်သင့်အားကူညီပေးပါမည်ပါနဲ့တော့။
ရခိုင္ေကလပ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊လူအများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အားကစားနှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်စု၊အလေးချိန်ဆုံးရှုံးသွားဖြစ်ပါတယ် ၃၀%အားကစားသမား။
သင်လျော့နည်းအစာစားလျှင်ဆားနှင့်အပိုခါးအနီရောင်ငရုတ်ကောင်း။ ဆား-အခမဲ့အစားအသောက်ကူညီပေးပါမည်ဖယ်ရှားပစ်ရပိုလျှံအရည်၊ငရုတ်ကောင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများပါရှိသည် capsaicin၊အရှိန်မြှင်ဇီဝြဖစ်အားဖြင့် ၂၅%။
အဆိုအရစစ်တမ်း၏ဆရာဝန်၊အဓိကအကြောင်းရင်းများတဦး၏အလိုအလြောကျော်—က အလုပ်မှာစိတ်ဖိ။ လျှင်သင်တို့ကိုအလေးပေးကြသည်အဆင်းထိုင်နှင့်အယူအနည်းငယ်နက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူခြင်း၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါအဆိုပါနည်းလမ်းကို diaphragmatic အသက်ရှူခြင်း(အခါ၊သငျသညျမီးခံရှူရှိုက်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေ)။ သင်တဖြည်းဖြည်းဆင်းမငြိမ်သက်၊နှင့်အလိုဆန္ဒကိုဘမ်းဆီးသင့်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲမည်မဟုတ်ပေါ်လာ။
ပြုခိုင္ေနံနက်ယံ၌ပိုကောင်းမီ၊ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့န့်ညက်။ ပဌမ၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်အရှိန်မြှင့်ဇီဝြဖစ်များအတွက်နေ့ရှေ့ဆက်၊နှင့်ဒုတိယအ၊အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အမည်စွမ်းအင်ခံဘဲအစားအစာကနေမှသင်၏ကိုယ်ပိုင် adipose တစ်ရှူး။
ထမ်းဆောင်မီအဆိုပါညစာစားစားပွဲပေါ်တွင် မည်သည့်အကြီးအပိုင်းပိုင်း၏အစားအစာကောင်းကိုဖြတ်။ ဤသင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်လောင်ဖို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၀%နည်းပါးလာကယ်လိုရီကတည်းကချပ်ဝေမျှခံရဖို့ဟန်ထက်ကြီးမားလျှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဖဲ့ကိုရခြင်းအတွက်။ နှင့်အလှည့်သင်၏မျက်စိ၊သင်လူမိုက်တို့နှင့်အတူအစာအိမ်။
ပြီးပြည့်စုံသောမာပညာရှင်များအသိအမှတ်ပြုအသားပြုတ်ကြက်ဥနှင့်အတူတစ်အပိုင်းအစမုန့်သို့မဟုတ်အသီးကိုသီး။ ဥများမှာပရိုတိန်းကြွယ်ဝသော၊မြတ်ခန္ဓာကိုယ်အ expends ကယ်လိုနေ့ကိုတလျှောက်လုံး၊အထံတော်၌ဤပန်းကန်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်စွမ်းသင်နှင့်မပေးအမြန်။
ကစားအႏွဂန္ထဝင်ဂီဆင်းထိုင်သည့်အခါအစာကိုစား။ အောက်မှာထိုကဲ့သို့သောပူးတွဲပါလူအစားလျော့နည်းအပေါ်ပျမ်းမျှ ၁၅-၂၀%သောကြောင့်ဝါးနှေးနှင့်အစားကောင်း၏။
ဝါးဂရုတစိုက်။ ကြိုးစားရန်အသီးအသီးကိုက်မှာအနည်းဆုံး ၂၅ ကြိမ်ပေးပို့ခြင်းမပြုမီကအစာအိမ်။ နှစ်ခုဆက်စပ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူးရေရှည်အတွက်လာ:ပထမ၊ဤသူအစားအစာများအစာကြေဖို့လွယ်ကူ;ဒုတိယ၊နှိပ်နယ်၏အဖုံး၊တားဆီးတံုရောဂါ။
ဝါး sugarless ဖုံးပြီးနောက်ချက်ချင်းစားသုံးခြင်းနှင့်နှစ်နာရီပြီးနောက်။ ဒီအကူအညီနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း unmotivated။
ချက်ပြုတ်အမဲသားကိုမဒယ်အိုး[!@#$]၊ နှင့်မီးဖို၌ဒါမှမဟုတ်အသားကင်ပေါ်(ဒီမှာရရှိနိုင်အများဆုံးခေတ်သစ်မီးဖို)။ ဒီအပြောင်းအလဲဖယ်ရှားနည်းလမ်းအမဲသားကိုအထဲကပိုလျှံဆီဥနှင့်ကင်သည်ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ကထပ်ပြောသည်။
အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်ဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးဓါတ်[!@#$]၊ ရာတက်အမြန်နှုန်းအပြောင်းအလဲအဆီ၏စွမ်းအင်သို့။ ထို့ကြောင့်၊၏ပုံမှန်စားသုံးမှုဒီမသောက်နိုင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်အားဖြင့်နီးပါး ၂၀%။
ကြိုးစားဆိတ်သငယ်ကိုဒိန်ခဲအစားနွားမ: က ၄၀%လျော့နည်းကယ်လိုရီ၊ဒါပေမယ့်မညံ့ဖို့အကြောင်းအရာကိုအသုံးဝင်သော။
အစားခေါက်ဆွဲသို့မဟုတ် buckwheat အဖြစ်အသုံးပြုရန်အပါအပဲဟင်းသို့မဟုတ်ပဲ။ ပဲဆံ့များများ၏အမျှင်နှင့်အထူးအမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ထိုသို့အားဖြင့်ကူညီတက္တက္ႂဖယ်ရှားပစ်ရအဆီ၏။ ၂၊၅ လ"ပဲစား"သင်ဆုံးရှုံးနိုင်ပွင့်မှ ၇ ကီလိုဂရမ်။
လုံးဝပပျောက်ဆီမွနူးမ[!@#$]၊ သောကြောင့်သာရှိလျှင်သူတို့အတွက်လိုအပ်သောစုပ်ယူမှုအများအပြားဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်။ ကောင်းတို့နှင့်သူတို့ကိုအစားထိုးဖို့"ကျန်းမာရေး"သည်၊ဆိုလိုသည်မှာ၊မယ့်အစားအဆီနို့နှင့်အသားထုတ်ကုန်များကြက်၊အသား၊ကြက်ဆင်၊ငါး၊ပိုက်ဆန်နှင့်သံလွင်ဆီ၊ငှက်ဥ၊အခွံမာသီး။ လေ့လာမှုများအကြောင်းပြသဒီစားထိုးမသာကိုယ်အလေးချိန်ကိုအားပေးအားမြှောက်ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်ကောင်းသည်။
မကြိုးခုန်။ အများငြင်းပယ်နံနက်အချိန်ဘောဇဉ်တိုးစုစုပေါင်းနေ့စဉ်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုအားဖြင့်က ၁၀၀။
ပေမယ့်ပန်းသီး၏ထုတ်လုပ်မှုလှုံ့ဆော်ကိုအစာအိမ်ဖျော်ရည်နှိုးဆော်နှင့်အစာစားချင်စိတ်၊ စားသုံးမှု၏တပန်းသီးမပြုမီ ၁၅ မိနစ်အနေ့လယ်စာသို့မဟုတ်ညစာစားကိုလျော့နည်းစေစုစုပေါင်းကယ်လိုရီအကြောင်းအရာကိုသင့်အစားအစာများအတွက် ၁၅၀-၂၀၀ႏွ နေ့။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရှင်းပြဤ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ပန်းသီးအမျှင်ဓာတ်မြင့်မား။
အသုပ်၊သံလွင်ဆီ၊အစားအသောက်ထက်အခြောက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်။ လောင်ပါသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်သံလွင်ဆီ၊ခန္ဓာကိုယ်ကိုထုတ်လုပ်အထူးပရိုတိန်း၊နှင့်"ပြော"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဆန့်ကျင်ဘက်။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျနှိမ်ကျန်နေတဲ့အစာစားချင်စိတ်နှင့်ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောအချိုးစားအစာအကြား—၃ နာရီ။ ထိစောင့်လျှင်သင်သည်သင်ထိုနောက်ရေစာသို့မဟုတ်ညစာတော့ပါထိုအသွေးကိုသကြားအဆင့်စတင်ခုန်ရန်၊ဇီဝြဖစ်ဝင်ဖြား၊သင်အန္တရာယ်အစားအစာနှင့် overeat။
ထည့်ဖို့အမဲသားကိုနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းလျာအပြားပြား။ ကယ်လိုရီနီးပါးရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်အများကြီးရှိပါတယ်ဗီတာမင် C၊မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲအဆီစွမ်းအင်သို့။
အတူသံလွင်ဆီ၊ အသုပ်နိုင် refilled နှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းရှလကာရည်သို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်းကအပေါ်အခြေခံ။ ဒါကြောင့်အက်ဆစ်များပါရှိသည်၊သောအမြေဆီလွှာ၏အဆီအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့။
မစားပါနဲ့။ ထိုင်စားပွဲ၌၊ထိုလူစား ၃၀%လျော့နည်း။
စားသောသူတို့နှင့်အတူအစားအနည်းငယ်။ အဖြစ်စိတ်ပညာရှင်ပွောဆို၊လူမသိနှိုင်းယှဉ်၏အရွယ်အစားနှင့်သူတို့စားသုံးခြင်းနှင့်အတူနေ့လယ်စာနီးချင်းနှင့်ထိန်းညှိဖို့။ ထိုကွောငျ့၊အမျိုးသမီးထမင်းစားခန်းနှင့်အတူယောက်ျားအများအားဖြင့်လောင်ကြောင်း ၂၀-၃၅%ခါတိုင်းလိုထက်ပို။ ဒါပေမယ့်အစာစားခြင်းစုံတွဲတစ်တွဲနှင့်အတူတစ်ဦးကရည်းစားရှိတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
မကျသို့အပြီးနောက်ချက်ချင်းကိုယ်အလေးချိန် သို့မဟုတ်အခြားပြင်းထန်သောပမာဏ၊သို့သော်သင့်ကိုငြီးငွေ့များမှာ။ လွယ်ကူသောအဘို့အ ၁၅-၂၀ မိနစ်လိမ့်မည်တိုးချဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြေဆီလွှာ၏အဆီသိုက်နှင့်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်၊ဆန့်ကျင်ပေါ်၊ထိုအလိမ့်မည်လျှော့ချ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသင့်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအနည်းဆုံး။
အချိုရည်အတွက် ၄-၈ ကြိမ်မြင့်မားကယ်လိုကော်ဖီနှင့်အထောက်အကူချွန်ထက်တိုးလာ၏သကြားဓာတ်အဆင့်ကိုအတွက်။။။။။ ဒါကြောင့်လျှင်ကော်ဖီ၊လက်ငင်းပင်၊ကိုယ့်အရှိန်မြှင့်ရန်သင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်ကူညီလိမ့်မည်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အဝလွန်၊ယ့္က်စွမ်းအင်ကို၊ပြောင်းပြန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၏အသွင်အပြင်ပိုလျှံအလေးချိန်။
မသောက်ထုပ်ပိုးအသီးကိုသီးဖျော်ရည်:သူတို့ဆံ့အလွန်အကျွံတွင်းသကြားဓာတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်အများကြီးကယ်လိုရီ(၄၀-၆၀၊၁၀၀ င့္ဘူး)။ ကယ်လိုရီတန်ဖိုး၏လတ်ဆတ်သောအတူ၊ဒါပေမဲ့သူတို့ဆံ့အလွယ်တကူစာသကြားနှင့်အများကြီးပိုပြီးဖိုင်ဘာ။
အတွက်အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်နို့ရည်နီးပါး ၂ ကြိမ်လျော့နည်းကယ်လို[!@#$]၊ ပုံမှန်အတိုင်းထက်ပို၊ဒါပေမယ့်၏တူညီသောငွေပမာဏကယ်လစီယမ်နဲ့ဖော့စရာတိုးလာ၏အပြောင်းအလဲအတွက်အဆီဆဲလ်တွေ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊နို့ဆီသည်အန္တရာယ်များအတွက်နှလုံးနှင့်သွေးကြောနှင့်တိုးပွားလာလက်စထရောအဆင့်ကို။
သင်ပင်လျှင်အလွန်ငြီးငွေ့၊ စျြလြူရှု၏လိင်ဘဝ။ လိင်ဆက်ဆံလောင် ၁၅၀ အတွက်ကယ်လိုရီ ၂၀ မိနစ်နှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေအထူးဟော်မုန်းဇီဝြဖစ်ထအမြန်နှုန်း။
စီစဉ်ပြီးတာနဲ့တစ်ပါတ်တစ်ငါးနေ့။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဘို့အဗီတာမင်ဃဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်တပြင်လုံးကိုအဘို့အရက်သတ္တပတ်။ ငါး၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအချို့သောမျိုးစိတ်၊အဆီထဲမှာအနိမ့်နှင့် saturates။ အဏ္ဏဝါငါးစနစ္တစ္ခုကိုအဆင့်၏အသွေး၌လက်စထရော။
အခြောက်လှန်းအသီးကိုသီးစဉ်အတွက်ဖြစ်၏နေအိမ်[!@#$]၊ ဥပမာအားဖြင့်၊သုတ်ခြင်း၊အခြောက်လှန်းပန်းသီး။ အကြားအစားအစာများ၊သင်ခံစားရလျှင်အားကြီးသောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊စားနိုင် ၃-၄ သုတ်သင်သို့မဟုတ်အဖြစ်အများအပြားအချပ်ပန်းသီး၏။
ဆန်စပါးအနည်းငယ်သာပါရှိသည်ယမ်(အနှောင်အရည်ကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်)၊ဒါပေမယ့်အများကြီးယမ်(နှင်သူမ၏)။ လျှင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်သင့်ရဲ့ဆန်(သင်သာထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ကြားနေသို့မဟုတ်အယ်ဓာတ်သတ္တုရေ၊ဒါပေမယ့်မဆီ!)၊ သင်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်အထိ ၁ ကီလိုဂရမ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏အရည်နှင့်အဆုံးထုတ်ကုန်များဇီဝြဖစ်၏။
ချို့တဲ့ဖို့ပိုလျှံအလေးချိန်ဖယ်ရှားပစ်ရ၊အားလုံးအမျိုးသမီးအဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်လျင်မြန်စွာကိုယ်အလေးချိန်ဖို့နည်းလမ်းတွေ။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိသင့်ကြောင်းအလေးချိန်ဆုံးရှုံးသွားဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲအလုပ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်း။ ချောမွေ့ရန်ခက်ခဲလှတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊အသုံးပြုမှုအကြံပေးချက်များအောက်ပါသင်ရနိုင်ထိရောက်သောရလဒ်။
လူတိုင်းအတွက် buckwheat အစားအစာအသေးစိတ်
buckwheat diet မှာကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အသေးစိတ် menu, ခွင့်ပြုနှင့်တားမြစ်ထားသောထုတ်ကုန်, ဂျုံယာဂုချက်ပြုတ်များအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ။
7 စက်တင်ဘာ 2020
အထိရောက်ဆုံးကိုယ်အလေးချိန်လေ့ကျင့်ခန်းကဘာတွေလဲ။ဝမ်းဗိုက်၊ ခြေထောက်၊ လက်များ၊ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအတွက်အိမ်၌ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းစေရန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သည်။
5 စက်တင်ဘာ 2020
keto အစားအစာ၏အခြေခံမူနှင့်အင်္ဂါရပ်များ။အဆိုပါ keto အစားအစာ၏အကောင်းအဆိုး consဒီအစားအစာကိုဘယ်သူလိုက်နာနိုင်မလဲ။
31 သြဂုတ်လ 2020
အမိန့် Keto Eat&Fit 50% လြှော့ခွငျး
တောင် BHB ရှုပ်ထွေးကိုယ်အလေးချိန်အဘို့